Maalinta: Noofambar 16, 2018
Xubnaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa ayaa booqday Kennedy Space Base oo ay NASA u adeegsaneyso dhammaan duullimaadyada duullimaadyada hawada iyo jaamacadda Embry Riddle Aeronautical, oo ku takhasustay arrimaha duulista iyo hawada. [More ...]
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa sheegay inay qorsheynayaan seddex geed halkii ay hal geed uga saari lahaayeen mashaariicda ay ka fuliyeen baaxadda borotokoolka sida garoonka diyaaradaha ee Istanbul. [More ...]
PendikHalkalı Dhamaystirka Khadka YHT
Wasaaradda Gaadiidka iyo Gaadiidka Cahit Turhan, oo ah xarun tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul (YHT) ilaa Istanbul-Pendik ayaa sheegay in adeegga, apı Pendik-Halkalı Waxaan rajeynayaa inaan furi doonno qadka adeegga billowga hore ee 2019. Sidaa darteed, rakaabka, Pendik'te si dhakhso leh [More ...]
Dhismaha dhismaha ee YHT
Degmada Geyve ee gobolka Sakarya, waxay sii wadeysaa dhismaha qodista Tareenka Xawaaraha Sare iyadoo aan fasax loo siinin shirkadda qandaraasleyda ah ee daad qaaday wabiga. Qodistii Dhismaha Tunniska ee HAT ee Geyve [More ...]
23 waxaa soo qabanqaabiyay Metro Istanbul. Darawalka tareenka ee 58 oo si guul leh u dhammaystiray Tababbarka Darawalada Tareenka ee Term waxaa la siiyay shahaado xaflad. Maareeyahayaga guud Kas Km Kutlu, Kuxigeenka Maareeyayaasha guud, tababarayaasha iyo darawalada tareenka ee helay shahaadooyinkooda [More ...]
Israel Oo Qorshaynaysa Inay Dhisiso Khadka Telefishinka ee Jerusalem
Naqshadeeyayaasha iyo dhaqdhaqaaqayaasha waxay ka falcelinayaan khadka xariiqda ee Israa’iil qorsheyneyso inay dhisto si ay u xoojiso gacan ku haynta Yeruusaalem. Maamulayaasha mashruuca Israel, khadka gawaarida fiilada ayaa magaalada ka badbaadin doona buuqa taraafikada iyo 3 kun oo dalxiisayaal ah saacaddiiba galbeedka [More ...]
Dib u soo celinta codsiyada qorista TCDD 157 ayaa socota. Marmaray, Halkalı Codsiyada shaqaalaysiinta ee TCDD 157 ee loo samaynayo Agaasinka Dayactirka Maareynta iyo agaasimeyaasha aqoon isweydaarsiga ee gobollada qaarkood ayaa lagu dhammaystiri doonaa viaKUR. [More ...]
Go'aanka IDO ee Xiritaanka Laynka Guriga Dhibbanayaasha Muwaadiniin badan
Go'aankii IDO ee ahaa in la xiro khadadka maxalliga ah wuxuu waxyeeleeyay tiro badan oo muwaadiniin ah. Dhibbanayaashan ayaa horseeday dib-u-wada-hadal ku saabsan shaqsiyaadka laga sameeyay waaxyada muhiimka ah sida gaadiidka. Sababtoo ah gobolku kuma dhexgalin karo ganacsiyada laga iibiyey waaxda khaaska ah. [More ...]
Mawduucyada Halista ah ee Mashruuca Metro Metro ee Istanbul
Wadarta tirada wadooyinka tareenka ee laga heli karo Istanbul waa kiiloomitir 170, oo ay tahay inay gaaraan kiiloomitir 1100. Duqa Magaalada Istanbul (IMM) Duqa Magaalada Mevlüt Uysal oo la kulmaya kooxdiisa ayaa ah soo jeedin muhiim ah oo lagu dardar gelinayo gaaritaanka himilooyinkan. [More ...]
IZBAN oo doonaya in mushaar kordhin loo sameeyo
Shaqaalaha IZBAN ee aan aqbalin in lagu soo rogo boqolkiiba 14 waxay rabaan inay sare u qaadaan boqolkiiba 26. Shaqaalaha İZBAN, halkaasoo lagu dhajiyay go'aankii shaqo-joojinta, waxay caddeeyeen inaysan aqbali doonin xayiraadda 14 ee sicir-bararka hoos yimaada Madaxweyne Erdo Presidentan. [More ...]
Ka dib markii uu IZBAN ka soo galay magaalada Metro ee magaalada Strike Door
Ururka Shaqaalaha Tareenka, oo go'aanka shaqo joojinta u geeyay Xarunta Alsancak maalin ka hor natiijooyinka wadaxaajoodka gorgortanka wadajirka ah ee Nidaamka Suburban Izmir (İZBAN), sidoo kale. [More ...]
Wasiirka Turhan: Mak Waxaan rabnaa inaan ka dhigno mashruuca 3-Decked Great Istanbul ee 2019 Bakan
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, wuxuu sidoo kale tixraacay 3 dabaqyo badan oo dabaq ah oo laga qorsheeyay Istanbul, Turhan wuxuu sheegay in tunnelka uu bixin doono labadaba wadada iyo gaadiidka tareenka. Turhan, mashruuca wadada [More ...]
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha, wuxuu sheegay in wadada 5 ee kala duwan laga shaqeynayo hoostaga Mashruuca Channel Istanbul iyo in mashruucu dhamaanayo. Project Istanbul Canal, ku nuuxnuuxsaday in ay tahay mid ka mid ah mashruuca aragtida Turkiga [More ...]